Detoronomy 14 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 14
Vahoaka voafidy - Fifadiana ny hanina maloto - Fandoavana ny fahafolon-karena.
1Zanak'Iaveh Andriamanitrareo hianareo. Aza mitetika ny tenanareo; aza misy faritra haratanareo amin'ny elanelan-masonareo, noho ny amin'ny maty. 2Fa vahoaka masina ho an'ny Tompo Andriamanitra hianao, ary nofidin'ny Tompo mba ho vahoakany manokana amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany.
3Aza mihinan-javatra maloto na inona na inona.
4Izao no biby ho fihinanareo: ny omby, ny ondry sy ny osy, 5ny serfa, ny gazela, ny daima, ny osy dia madinika, ny antilopa, ny ombimanga, ny osy dia. 6Rahefa mety ho biby mivaky kitro sy mitsampan-tongotra ary mandinika dia hano; 7fa aza mihinana izay mandinika fotsiny, na izay mivaky kitro sy misampan-tongotra fotsiny, toy ny rameva sy ny bitro dia amam-bitro, fa mandinika ireo, fa tsy mivaky kitro, maloto aminareo ireny; 8toy izany koa ny kisoa, mivaky kitro ihany izy fa tsy mandinika, haloto aminareo izy, koa aza mihinana ny henany, aza mikasika ny fatiny.
9Izao no biby hohaninareo amin'izay rehetra ao anaty rano: izay rehetra misy vombo aman-kirany dia hohaninareo, 10fa aza mihinana izay rehetra tsy misy vombo aman-kirany, maloto aminareo izany.
11Hano avokoa ny vorona madio rehetra. 12Izao no tsy hohaninareo: ny egla, ny orofiray, ny papango; 13ny voromahery, ny fanindry, mbamin'ny aotoro isan-karazany; 14ny goaika isan-karazany, 15ny ostrisa, ny tararaka, ny vorondriaka, mbamin'ny hitsikitsika isan-karazany; 16ny vorondolo, ny ibisy, ny vorondolo be; 17ny pelikano, ny manarana, ny vivy, 18ny vano be, mbamin'ny vano isan-karazany, ny lavasanga, sy ny manavy. 19Ny biby kely manan'elatra rehetra, dia hevero ho maloto, ka aza homana izany. 20Fa ny vorona madio rehetra no hano.
21Aza mihinam-biby maty ho azy, fa omeo ny vahiny ao anaty vavahadinao izany hohaniny, na amidio amin'ny vahiny. Fa hianao dia vahoaka masina ho an'ny Tompo Andriamanitrao.
Aza mahandro zanak'osy amin'ny rononon-dreniny.
22Atokano ny fahafolon'ny vokatra rehetra avy amin'ny voa nafafinao, dia ny vokatry ny taninao isan-taona. 23Ary hohaninao eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao, amin'izay fitoerana hofidiny hamponenany ny anarany, ny fahafolon'ny varinao, sy ny divainao vaovao sy ny diloilonao, mbamin'ny voalohan-teraky ny omby aman-ondrinao, mba hianaranao hatahotra an'ny Tompo Andriamanitra mandrakariva. 24Nefa raha lavitra loatra ho anao ny làlan-kaleha ka tsy azonao entina any izany noho ny halaviran'ny fitoerana hofidin'ny Tompo Andriamanitrao hamponenany ny anarany, rahefa nambinin'ny Tompo Andriamanitrao hianao, 25dia takalozy vola ny fahafolom-bokatrao, ka fihino ao an-tànanao ny vola dia mankanesa amin'ny fitoerana izay nofidin'ny Tompo Andriamanitrao. 26Amidio izay rehetra irin'ny fanahinao amin'ny vola, na omby, na ondry, na divay, na lalikera misy alikola, izay rehetra tian'ny fanahinao, ka mihinàna eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao, ary mifalia hianao sy ny ankohonanao. 27Aza manary ny Levita izay ao anatin'ny vavahadinao, fa tsy mba manana anjara na lova eo aminao izy.
28Amin'ny faran'isam-pahatelo taona dia atokàny ny fahafolon'ny vokatrao rehetra amin'izany taona izany, ary ataovy eo anatin'ny vavahadinao. 29Ka aoka ho avy amin'izay ny Levita izay tsy mba manana anjara na lova eo aminao, mbamin'ny vahiny sy ny kamboty amam-pitondrantena izay ao anatin'ny vavahadinao, dia hihinana izy, ka hivoky mba hanambinan'ny Tompo Andriamanitrao anao amin'ny asa rehetra ataon'ny tànanao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0901 seconds